Alarobia 10 Jolay 2019. – FJKM
Alarobia 10 Jolay 2019.
Ny fahotan’ny Jentilisa no noresahina tao amin’ny Rom 1.18-32 . Ny fahotan’ny Jiosy kosa no ambara eto .Ny tsy fahatanterahana ny lalàna no fototry ny fahotan’ny Jiosy , izay ampiarahiny amin’ireto zavatra roa ireto:
1-Mpitari-bato vilambava (and17-24)
Hafa ny zavatra ampianariny , hafa ny zavatra ataony . Ny zavatra andrarany olona ihany no ataony araka ny voalaza ao amin’ny and 21-23 . Eto indray ny zavatra ampianarina ny hafa , tsy tanterahina . Izany no atao hoe: »mpitari-bato vilambava, hafa ny tondroin’ny molotra , hafa ny ataon’ny tànana »
2-Mitoky amin’ny fombafomba (and25-29)
Tsy ny lalàna ihany no nianteheran’ny Jiosy aminn’y hevitra diso , fa fombafomba toy ny famorana koa izy ireo . Tsy diso ho azy anefa ny fanatanterahana ny famorana , fa tsy maintsy ampiarahina aminn’y fanatanterahana ny lalàna araka ny voalalza ao amin’ny and 25 : « Fa ny famorana mahasoa tokoa , raha mankato ny lalàna kosa ianao , dia efa tonga toy ny tsy voafora , na dia efa voafora aza » . Mbola tsara lavitra ny olona voafora nefa tsy mankato ny lalàna aza ny olona tsy voafora nefa mankato ny fitsipiky ny lalàna(and26).